Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD kunogarirwa ari kutengesa zvinhu uye zvigadzirwa kuva isina kuremara muzvikamu uye magadzirirwo kwenguva yakati kubva musi zvacho. Mukati gore rimwe Ticharumbidza kugadzira basa panguva hapana zvimwe vaitarisira kuti anotenga. warranties All vari ndonda kana adzoka chinhu kana chigadzirwa akawanikwa kunge zvisirizvo, vaishungurudza, ndikamumara, mishandled, mislabeled, dzakachinjwa kana akachinjwa chero nzira kana kukonzerwa ipi njodzi.
Zvichakadai, mukati memazuva 7 pashure wakurukura, zviri kuwanikwa dzosera kana kutsinhanisa zvinhu kana paine matambudziko unhu.
In Warranty - Year mumwe
All vakadzoka zvinhu zvichange pakugadzira mu isina basa uye zvinhu nokuchengeta sezvo chinhu kana chigadzirwa mukati garandi nguva (kunze zvisiri pamutemo wakaremara). In ichi mazwi kutumirwa mutengo achapiwa kugoveranwa nemapoka acho.
Kunze garandi chinhu kana chigadzirwa kuti kugadzira webasa achapiwa dzinoongororwa nechimwe RSC (RMA Service Rusimbiso) pamwe vanofungidzirwa mari zvikamu uye basa.
Customer vanofanira kubvumirana vaidzoka mitoro muripo weUS akagadzira chinhu kana chigadzirwa ne "EKS-WORKS" kutumirwa izwi panguva fekitari wedu Shenzhen China. (Mapato vaviri kutumirwa mutengo achava nemhosva nokuda vatengi.)